Andro: 27 Desambra 2019
Hanome ny firenentsika ny fiara an-trano
iray amin'ireo Tiorkia-pirenena manan-danja indrindra tetikasa "100 isan-jato Car an-tokantrano" no nampiditra ny Atoa Filoha Recep Tayyip Erdogan ny anjara amin'izao andro izao. Ny fampiroboroboana ao amin'ny IT Valley any Gebze; minisitra, mpanatanteraka ambony sy orinasa [More ...]
Fitaovana an-trano an-trano hiorina ao Bursa Gemlik
Raha ny filazan'ny orinasa mpamokatra fiara eo an-toerana dia haorina ao Bursa. Fanohanana betsaka ny governemanta homena ny mpiantoka, ao anatin'izany ny fividianana ny fividianana. Nandritra ny fivoriana fampiroboroboana fiara an-trano tao Gebze dia nilaza ny filoha Recep Tayyip Erdoğan, "Androany [More ...]
Automotive Sector Mpitarika, KPMG Torkia Hakan Ölekl ny Torkia, dia nilaza fa an-toerana tonga vaovao ny fomba fanaovana tetikasa fiara. Hanova ny lafiny automatique amin'ny lafiny iray ny teknôlôjia ary hanomboka ny dia mankany amin'ny tanàna marani-tsaina. [More ...]
Fantsona Channel Istanbul avy any Istanbulites! Nisy tady lava
Ireo olompirenena izay nirohotra tany amin'ny talen'ny vondrom-paritry ny tontolo iainana sy ny tanàn-dehibe dia nametraka filaharana lava hametraka fitoriana amin'ny Channel Istanbul Project. Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Istanbul (IMM) Ekrem İmamoğlu dia nilaza fa "Ny olom-pirenena tsirairay avy dia mankany Istanbul [More ...]
Tiorkia Automobile Enterprise Group (TOGG) dia nentina nivoaka ny IT Valley 'ao amin'ny Innovation Journey' ny fivoriana, izay ny fikambanana mahazo avy any amin'ny farany 18 volana sy ny teknolojia amin'izao fotoana izao ao Torkia fiovana nizara ny fomba hitarika. Chambers sy ny entam-barotra ny fifanakalozana Torkia [More ...]
Ny fanandramana fitsapana Metrobus vaovao no nanomboka
Fanombohana Fitsapana Metrobus Vaovao Nanomboka: Ny asa fanatanjahantena Istanbul dia nanomboka nanavao ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny zotra Metrobus. Amin'izany toe-javatra izany, nisy fiara fitaterana kofehy indroa nisedra herinandro vitsivitsy. Halim [More ...]
AVY AMIN’NY MINISINAN’NY FIKAMBANANA SY ASA VAVOLOMBELONANA: ENERGY SY TABU RESOURCES EXPERT ASSISTANT ADMISSION EXAM I - FIKAMBANANA NY FIJORO - Noho ny antony nanendrena azy ireo any amin’ny foibem-pitantanan’ny Minisiterantsika (ANKARA); Anisan'izany ny 8 sy [More ...]
Ny fanendrena mpiasa amina mpiasa miisa 42 mpanampy amin'ny indostrian'ny indostrian'ny teknolojia sy teknolojia izay voatanisa ao amin'ny vondrona foibe an'ny Ministeran'ny indostria sy ny teknolojia ary ny departemanta / mpampianatra, ny mpiasa, ny kilasy, ny anaram-boninahitra ary ny mari-pahaizana voafaritra ao amin'ny tabilao etsy ambany. [More ...]
Direction Générale d'Étolologie d'exploitation
Mba hiasa ao amin'ny fikambanana isam-paritry ny Direction Générale d'Étraulic Générale mifanaraka amin'ny andininy faha-657 / A ao amin'ny Lalàn'ny mpiasam-panjakana No. 4; Mpandehatra 35 (dimy amby telo-polo) injeniera voatanisa etsy ambany [More ...]
Tale jeneralin'ny làlam-be
Mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny lalàna momba ny fanadinana sy fanendrena olona manokana ara-teknika izay hotendrena amin'ny Tale jeneraly foibe amin'ny làlana voalohany, araka ny andininy faha-657 / A ao amin'ny Lalànan'ny mpiasan'ny sivily no. [More ...]
Famatsiam-bola amina miliara 22 no hatao hanamboarana orinasa an-trano an-trano hiorina ao Bursa
Tiorkia Cars Initiative Group (TOGG) tsipiriany momba ny fiara izay natomboka famokarana Torkia efa nambara. Araka ny fanapahan-kevitra nivoaka tao amin'ny gazety ofisialy ny Filohan'ny Torkia, Recep Tayyip Erdogan sonia ny fiara orinasa mpamokatra entana fototra ao Bursa, Torkia [More ...]
ARUS-TSE Serivisy fanamarinana asa fanamboarana lalamby
ARUS-TSE fiofanana momba ny asa fanamarinana lalamby no natao; Ny atrikasa momba ny fanamarinana sy ny fanamarinana ny lalamby dia nalamina niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny ARUS sy TSE tao amin'ny efitrano fivoriambe OSTIM OIZ miaraka amin'ny fandraisana anjara betsaka. Ao amin'ilay atrikasa, ny andiany voalohany amin'ny TSE [More ...]
Tiorkia Automobile Enterprise Group (TOGG) famelabelarana dia hatao androany. Nanomboka tamin-jotom-po hiandry ny fampisehoana ny vahoaka. Hoentin'ny IT Valley any Gebze ny fampisehoana. Fanolorana fiara eo an-toerana miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan amin'ny zoma 27 desambra [More ...]
KARDEMIR Mamita ny famatsiam-bola roa lehibe kokoa amin'ny tontolo iainana
Nanomboka tamin'ny taona 2019 ny KARDEMİR tamin'ny fanokafana ny famatsiam-bolan'ny tontolo iainana vita tany amin'ny faritra Sinter ary nanokatra andiam-bolan'ny tetik'asa nokendrena ny fitomboan'ny fahaiza-manao nandritra ny taona. [More ...]